चिन्तामणि चालिसे : समाजसेवाको पर्यावाची नाम
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा पर्ने मणिग्राम चोकबाट चार किलोमिटर पूर्वमा छ– प्रदीपनगर गाउँ । अचेल बाहिरबाट प्रदीपनगर पुग्ने नयाँ व्यक्तिलाई ठेगाना दिँदा भन्ने गरिन्छ– बसवालालाई चिन्तामणि चोकमा झार्न भन्नु, अलमलमा परिँदैन ।
लुम्बिनी बौद्ध सर्किट भएर बुटवल र भैरहवासम्म चल्ने बस चालकहरू चिन्तामणि चोकप्रति जानकार छन् । भलै चोकमा कहीँकतै चिन्तामणि चोक लेखिएको छैन । ’चोकको नामाकरण त देखिँदैन तर सबै जना चिन्तामणि चोक भन्दै झर्ने भएकाले हामीहरू पनि अभ्यस्त भयौं,' सोमवार लोकान्तरकर्मीसँगको भेटमा दुई वर्षदेखि सो रूटमा माइक्रो बस चलाउँदै आएका एक चालक भन्दै थिए ।
प्रदीपनगर चोकले यत्तिकै चिन्तामणि चोकको रुपमा भाका फेरेको होइन । यसमा समाजसेवा, त्याग र समर्पणको ठूलो गाथा जोडिएको छ । चिन्तामणि चालिसे ती हुन्, जसको पर्यायवाची नाम समाजसेवी हो । चालिसेले गरेको समाजसेवा यसरी स्थानीयको मनमनमा बस्यो की उनीहरू स्वतस्फूर्त चालिसेको नामलाई भूगोलसँग जोड्न थाले । हुन पनि चिन्तामणिका समकालीन मात्र होइन नयाँ पुस्तासमेत उनको नामसँग पूरापूर परिचित छ । यसैको परिणाम हो–अमुक ठाउँका बस चालक पनि उनको नामसँग जानकार रहनु ।
७१ वर्षीय चिन्तामणि सयौं जनाका भाग्यविधाता हुन् । जतिबेला मणिग्राम चोकपूर्व बैंक, सहकारीको नामोनिसाना थिएन; त्यत्तिबेला उनी स्थानीयका लागि वित्तीय संस्था बने । रुपैंया–पैसाको रखबारीका लागि स्थानीयले उनलाई नै विश्वास गरे । उनले कसैको एक पैसा पनि तलमाथि नपारीकन स्थानीयको विश्वासलाई टुट्न दिएनन् ।
कोही बिरामी भयो, कसैको विवाह हुन थाल्यो, कसैले पूजापाठ आँटे, कोही विदेश जान थाल्यो, कसैलाई आपत्विपद् पर्यो वा कसैको मृत्यु भयो, स्थानीयमध्ये अधिकांश परिवारका सदस्य उनकै घरमा पुग्थे । 'मेरो बुबाले माग्न आएकोलाई भएसम्म दिनु, कोही पनि आफूसँग हुँदाहुँदै माग्न आउँदैन भन्नुहुन्थ्यो । त्यसैले मैले अरुले राख्नै दिएको पैसा भए पनि माग्न आउनेलाई दिन्थे,̕ चिन्तामणि भन्छन् । उनले पैसा माग्न आउनेसँग कहिल्यै लिखत गरेनन् न त जग्गाजमिन नै बन्धक । विश्वासकै भरमा उनले सयौंलाई सहयोग गरे ।
प्रदीपनगर, दिपनगर, डाँडा, गणेशनगर, मद्रहानी, कुमारी, बेलडाँडा, शिवपुर, चौकीडाँडालगायतका गाउँका कमै जना उनको सहयोगमा विदेश पुगेका होलान् । उनले विनाधितो गरिदिएको लगानीले अहिले सयौं जना आर्थिक रुपमा सक्षम भएका छन् । उनीकहाँबाट पैसा लिएर २० वर्षपछि फर्काउन आउनेहरू पनि छन् । 'सबै कुरा विश्वास हो । मेरो सहयोगले कसैलाई राम्रो हुन्छ भने किन नगर्ने भन्ने मेरो सोंच रहन्थ्यो,̕ उनी भन्छन् । आफन्त, नातागोतामा उनी सबैका मार्गदर्शक हुन् । महत्वपूर्ण विषयमा उनलाई नसोधी कसैले केही गर्ने आँट अहिलेसम्म पनि गर्न सक्दैन ।
चिन्तामणि उर्जाशील समयका व्यापारी हुन् । कुनैबेला मणिग्राम पूर्व टटेरासम्मको नुनतेल, लत्ताकपडा र सञ्चार सम्पर्क (टेलिफोन) को जिम्मा उनकै थियो । अहिलेको जस्तो नगद पैसा कमै व्यक्तिसँग हुन्थ्यो । टिपोटकैं भरमा उनले सबैलाई नुनतेल र लत्ताकपडा दिन्थे । क्रेताहरू सिजनमा धान बेचेको पैसा ल्याएर उधारो तिर्दथे । वारलेस टेलिफोन उनको पसलमा मात्र थियो । विदेश गएका छोराहरू उनकै पसलमा फोन गरेर आफ्नो परिवारसँग सुखदुःख साट्थे ।
उनको पहलमा स्थानीय स्तरमा विद्यालय खुले, बाटाघाटा, पुलपुलेसा, मन्दिर बने । विकास निर्माण र सामाजिक काममा उनी सधैं अग्रसर रहेँ । तर नेतृत्वको लागि कहिल्यैं हानथाप गरेनन् । उनी नेतृत्वमा अरुलाई ल्याउँथे, तर कामचाहीँ आफैं गर्दथे ।
चालिसे परिवार वि. सं. २०३४ सालमा गुल्मीको वामी आँपचौरबाट तराई झरेका हुन् । उनको जन्म २००६ साल कार्तिक १९ गते स्यालपोखरीमा भएको हो । जतिबेलादेखि उनी जान्नेसुन्ने भए त्यतीबेलादेखि नै परिवारको नेतृत्व उनले गरे । बुबा छविलाल र आमा मोतिकला उनलाई पूरै विश्वास गर्दथे । तराई झर्नेबेला उनी जग्गा हेर्न कञ्चनपुर र चितवनसम्म पुगे । तर मन रुपन्देही साविक करहिया गाउँपञ्चायतमैं अडियो । उनी आएसँगै आफन्तहरू पनि उनकैं भरोसामा यहाँ आएका हुन् । 'मामा हामीसबैंका मार्गदर्शक मात्र होइन यो क्षेत्रकैं एउटा उदाहरणीय समाजसेवी हुनुहुन्छ । उहाँले कयौंको दुःखमा मल्हम लगाउनु भएको छ । कयौंको भाग्य कोर्दिनु भएको छ,̕ चालिसेका भान्जा समेत रहेका तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार बीपी गौतमले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा भने, 'उहाँ वास्तवमा समाजसेवाको पर्याय नै हुनुहुन्छ । कसैलाई दुःख पर्दा उहाँले आफूलाई नै दुःख परेको ठान्नुहुन्छ ।'
विद्यालय, मन्दिर, गुठी, यज्ञ–यज्ञादीलगायत सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित देखे/जानेका सबै ठाउँमा उनको सहयोग छ । गुल्मीदेखि रुपन्देहीसम्म सामुदायिक विद्यालयमा उनले सक्दो धेरथोर सहयोग गरेका छन् । उनले गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालदेखि रजहरमा रहेको प्राकृतिक औषधालयमा समेत सहयोग गरेका छन् । सामाजिक कार्यमा सहयोग गर्न पाउँदा उनी आफूलाई सन्तुष्ट भएको महसूस गर्छन् । कक्षा ८ सम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका चालिसे कुनै बेलाका शिक्षक पनि हुन् । उनले ७ वर्ष गुल्मीमा माष्टरी गरे । उनको क्षमता देखेर तत्कालीन प्रधानपञ्चले उनलाई सिधै शिक्षकमा नियुक्त गरेका थिए । शिक्षण पेशा छाडेर उनी व्यवसायमा जोडिए । र, आफ्ना दुई भाईहरू प्रेमनाथ र ढालानन्दलाई पनि व्यापारमै करिअर बनाउने गराए ।
प्रदीपनगरमा उनको लत्ताकपडाको व्यापार सधैं उस्तै रहेन । गाउँठाउँमा पनि सहकारी खुल्न थाले, बैंकका शाखा विस्तार हुँदै गए । विदेशबाट रेमिटान्स झर्न थाल्यो । ल्याण्डलाइन र मोबाइल फोन क्रान्ति, सडक सुगमता, सवारीसाधनको उपलब्धताले गाउँसँग सहर जोडियो । चिन्तामणि पनि व्यापार छाडेर पानी उद्योगसँग जोडिए । तर उनले पानी उद्योगलाई पनि धेरै समय हेरेनन् । अत्यन्त सरल जीवनशैलीका चालिसे जीवनको उत्तराद्र्धमा आइपुग्दा अहिले 'रिटायर्ड लाइफ' बिताउँदैछन् ।
उनले जीवनमा जे गरे सबैको हितको लागि गरे । आफ्नो निहित स्वार्थमा कसैलाई पारेनन् । उनको यही विशेषता, भावनालाई बुझेर स्थानीय सुझबुझ भएका व्यक्तिहरू उनलाई ’मणि को उपमा दिन्छन् । यस्तो महान् विरासत बोकेको चालिसे परिवारमा ’मणि को बिडो थाम्न नयाँ पुस्ता तयार देखिँदैन । आफूलगायत भाईका छोराहरू सबै विदेश मोहमा छन् । उनी अहिले ९० वर्षीय आमा र जीवनसंगिनी दुर्गादेवीसँगै पुर्ख्यौली घरमा छन् । स्थानीय र आफन्त चाहान्छन्– चिन्तामणिको बिडो छोराले थामुन् ताकी सुखदुःख बिसाउने चौतारी सधैं रहिरहोस् ।
१३ लाख अवैध रुपैयाँसहित २ जना प्रहरी फन्दामा